Filtrer les éléments par date : dimanche, 24 mars 2019
dimanche, 24 mars 2019 22:53
Pety Rakotoniaina: Hiakatra Fitsarana etsy Anosy amin'ny talata
Dimy volana izao no nitazomana am-ponja vonjimaika etsy Antanimora an'i Pety Rakotoniaina, ampangaina ho nikasa hanangana Fanjakana anaty Fanjakana.
Raha iny hiazo an'i Fianarantsoa, avy aty Antananarivo, iny ny taxi-brousse nandehanan'ity mpanao politika, isan'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Hetsika Fanorenana Ifotony, ny talata 16 oktobra 2018, tokony tamin'ny 5ora hariva, dia nosakanan'ny Zandary teo Camp Robin. Nigiazana avy hatrany ny finday sy ny ordinatera nentiny.
dimanche, 24 mars 2019 22:47
Toamasina : Tonga eto ny hariva teo ny praiminisitra Ntsay Christian
Nisy ny toromarika ny tsy hanomanana fitsenana azy manokana teny ampahatongavana amin'ny seranam-piaramanidina Ambalamanasy.
Hanokatra ny "Conférence nationale annuelle des inspecteurs du travail", hanomboka rahampitso alatsinainy 25 martsa 2019 ao amin'ny Victoria Beach - Toamasina II ny praiminisitra.
Anaty fandaharam-potoanany ihany koa ny hamory ireo tompon'andraikitry ny filaminana eto Toamasina.
dimanche, 24 mars 2019 22:41
Behoririka: Une femme karana, noyée par 2 voleurs dans sa baignoire
Vers 17h, Rehana DINMAMOD, une dame de 55 ans, modeste qui vit seule, a été assassinée, par noyade, ligotée dans sa propre baignoire, par 2 voleurs.
Nirotsaka an-tsehatra niaraka amin'ny ekipa namono biby kely sy kantsetsitra tamin'ny kartie samihafa teto Toamasina i Irmah Naharimamy, kandida solombavambahoaka ato Toamasina I.
Tanàna mando lava i Toamasina, mora iparitahan'ny biby kely, indrindra ny moka, manampy trotraka ny loto sy ny rano mihandrona. Tsy hiandrasana ny fahatongavana eny Tsimbazaza izany fa mila andraisana andraikitra dieny izao, satria sarobidy loatra ny fahasalaman'ny mponina hoy hatrany i Irmah Naharimamy.
dimanche, 24 mars 2019 16:54
Farafangana: Mila fifanomezan-tanana ny fanarenana ny « Maison des Jeunes »
Ravan’ny rivodoza tamin’ny taon-dasa ity « Maison des Jeunes » eto Farafangana ity. Faniriana sady hetahetan’ny tanora eto an-toerana ny hanamboarana ka hamerenana azy amin’ny laoniny indray, satria manampy betsaka ny tanora ny fisiany.
Hitombo ampitoerana ny fahasimbana raha tsy izao dia irosoana ny fanamboarana. Manao izay ho afany ny tanora eto an-toerana nefa tsy ho vita izany raha tsy misy fifanomezan-tanana noho ny haleben’ny fahavoazana.
Tapaka tsy azo naleha, ary tena nanahirana ny mponina tety Manjakamiadana Boriborintany faha-2 Antananarivo renivohitra, ity lalankely ity, vokatry ny rotsak'orana nentin'ny andro ratsy.
Nandray andraikitra avy hatrany Randrianarisoa Stanislas na Rastany vao nahare io toe-javatra io, fanaony rahateo ny manampy ny mpiara-belona ka nanamboatra ny simba, ary dia vita soamantsara azo ampiasaina indray ilay lalankely ankehitriny.
dimanche, 24 mars 2019 16:17
Kitra – CAN 2019 (Q) : Niondrika teo anatrehan'ny Sénégal i Madagasikara, lalao famerenana
Notanterahina alina tao amin’ny kianja Lat Dior Thies - Sénégal ny lalao fifanintsanam-bondrona, famerenana teo amin’i Sénégal sy Madagasikara, ao amin’ny Vondrona A, niadian-toerana tamin’ny dingana famaranan’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika amin’ny baolina kitra na CAN 2019 izay tanterahina any Egypta.
Nirava tamin'ny isa Sénégal 2 - 0 Madagasikara izay efa nitarika 1 noho 0 ny Senegaley teo ampialan-tsasatra.
Efa samy tafita ho any Egypta na i Sénégal na i Madagasikara, ary tsy hanova na inona na inona ao anaty vondrona ny vokatry ny lalao.
dimanche, 24 mars 2019 14:32
“Kidnapping”: Kandida ho depiote sy mpampianatra nosamborina tany Tsaratanana
Olona miisa 07, ka vehivavy ny 03 no nosamborin'ny kaompanian'ny Zandarimaria tany Tsaratanàna, voarohirohy tamin'ny fakàna an-keriny an'i Rakotozafy Haingotiana Boson Denis Fugan, isan'ny nilatsaka ho mpifaninana amin'ny fifidianana solombavambahoaka, maty novonoin’ireo mpaka ankeriny efa ho herinandro izay.
Tsiahivina moa fa ny ampitson'io fakana an-keriny io, rehefa nisy ny fifanenjehena teo amin'ireo Zandary sy ireo mpaka an-keriny ireo dia tratra ny iray tamin'ireo 3 lahy nandray anjara mivantana tamin'izany. Ny famotorana natao azy io, no nitarika ny fisamborana ireo 6 mianadahy hafa nahitàna kandida ho depiote ny iray izay mpaniraka, vehivavy mpampianatra ny iray izay mpanome basy ary olona 4 hafa, mpiray tsikombakomba.